ခေါင်းဆေးကျွန်း(သို)မဏိဇောတကျွန်း ဘာကြောင့် မြစ်ရေမမြုပ်သလဲ – MM Crime
ဟင်္သာကိုးသောင်း ခြံရံပြီး ဟိမဝန္တာတောကနေ
အရှေ့ဘက်ကို အစာရှာ ထွက်ကြတယ်မြေးရဲ့။
အဲ့ဒီတုန်းက မော်လမြိုင်တဝိုက် တောတွေတောင်တွေ
တစ်နေ့တော့ ဟင်္သားကိုးသောင်း ရေပြင်ပေါ်အဖြတ်မှာ
မိုးကြောင့် ငှက်တွေ အတောင်စိုပြီး
ရေထဲပြုတ်ကျမယ့် ဘေးကိုမြင်တော့ ဘုရားလောင်း
ဟင်္သာမင်းက သစ္စာဆိုပြီး တိုင်တည်တယ်။
တောမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့အဆွေအမျိုး မိဘဘိုးဘွား
အိုမင်းမစွမ်း ဟင်္သာအပေါင်းနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့
ငှက်ငယ်လေးတွေ ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ အစာရှာပါတယ်။
ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့ပါက ဘေးအန္တရာယ်က ကင်း
လွတ်ပါစေပေါ့။ ဟင်္သာမင်းရဲ့သစ္စာစကားကြောင့် သိကြား
မင်းက မဏိဇောတပတ္တမြားကို ရေပြင်ပေါ်ပစ်ချပေးပြီး
” မဏိဇောတကျွန်း ”လို့ ခေါ်ကြတယ်။
နဂါးမင်းကလည်း သူ့ကိုယ်ငွေ့တွေလွှတ်ပြီး ဟင်္သာငှက်တွေရဲ့တောင်ပံကိုခြောက်သွေ့အောင်ကူညီခဲ့တာပေါ့။
အခုထိကျွန်းပေါ်မှာ နဂါးပွက်စမ်းတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့
သထုံပြည်မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ဘီလူးတွေကို
ရှင်အရဟံမထေရ်မြတ်က မနုဿီဟ ခြင်္သေ့လူသားနဲ့
ဆုံးမနှိပ်ကွပ်တော့ ဘီလူးတွေပြေးလာပြီး ဒီကျွန်းမှာ
ခေါင်းဆေးကျွန်း ၊ နတ်ရေတွင်း နှင့် ရှေးဘုရင်များ
ခေါင်းဆေးကျွန်းသည် မော်လမြိုင်မြို့ နှင့် မုတ္တမအကြား –
* ဟောင်သရောမြစ် (စန္ဒရောမြစ်)
စသည့် မြစ် ၅ ခုတို့စီးဝင်ပေါင်းစုံရာ သို့မဟုတ်
သံလွင် အထ္ထရံ ဂျိုင်း ဒုံသမိ မြစ် ၄ စင်း မှ ပင်လယ်သို့
စီးဝင် ပေါင်းဆုံရာ မြစ် ၅ ပွင့်ဆိုင်တွင် တည်ရှိသော
ခေါင်းဆေးကျွန်းကို ရှေးအခါက –
* ကျီးကျွန်း (crow island)
ရှေးအခါက မွန်ဘုရင်အဆက်ဆက်သည် ခေါင်းဆေးကျွန်း အနောက်နောင်အရပ် စနေထောင့်ရှိ နတ်ရေတွင်းမှ ရေဖြင့်
နန်းတက်ဘိသိတ်မင်္ဂလာပြုခြင်း ရန်အပေါင်းကို အောင်
မြင်ရန် ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုခြင်း ဘုန်းတန်ခိုးတက်စေရန် ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုခြင်း များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
မွန်ဘုရင်များသာမက မြန်မာဘုရင် ယိုးဒယားဘုရင်
အနော်ရထာမင်းသည် သထုံပြည်ကို လာရောက်တိုက်
ခိုက်စဉ်က မြို့ကို သိမ်းယူနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ပေ။ ရာဇသင်္ကြန်
မတ်၏ အကြံပေးချက်အရ ပွန်စလိုင်ရှိနတ်ရေတွင်းမှ
ရေကို ဆောင်ယူစေ၍ ဦးခေါင်းဆေး ပြီးမှသာလျှင်
သထုံမြို့ရှိ ကြက်မတစ်ဝပ်စာ လွတ်နေသော နေရာရှိ
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၄၆၁ ခုနှစ်တွင် အလောင်းစည်သူမင်း
သည် ပွန်စလိုင် သို့ရောက်လာကာ ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုခဲ့သည်။
သက္ကရာဇ် ၇၄၀ တွင် မွန်ဘုရင် ရာဇဓိရာဇ် သည်
ကို သားတော်အားကွပ်မျက်ရန် စေလွှတ်လိုက်သည်။
မသင့်သောအကြံ မပြုခဲ့ပါက သေလွန်ပြီးနောက်
မြန်မာတို့ဝယ် ဝင်စားပြီး ဟံသာဝတီကို အနိုင်ရပါ
ထို့နောက် ဖုံမသိန် ၃ ကျပ်သားကို သံပုရာနှင့် ရော
ရွှေချကာ သံဃာတော်များကိုဆွမ်းကပ်ပြီး ဘယ်ရန်သူမှ
အင်းဝဘုရင် မင်းဆွေ၏ မိဖုရားရှင်မိနောက်ခေါ်မိယာ
နှောင် သည် ကိုယ်ဝန်ရှိလာသောအခါ ဒလသရက်သီး
မုတ္တမမြေသင်းခဲ နှင့် ပွန်စလိုင်နတ်ရေတွင်းရေ ကိုချဉ်ချင်းတပ်သဖြင့် လက်ဆောင်ပဏ္ဍာနှင့်တကွ လွှတ်၍တောင်း
ရာဇဓိရာဇ်လည်း အင်းဝဘုရင်တောင်းဆိုသော အရာများ မပေးဘဲ အခြားသော ဒေသများမှ သာရှာဖွေပေးလိုက်
သက္ကရာဇ် ၈၁၆ ခနှစ်တွင် မွန်ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပုသည်
လည်း ပွန်စလိုင်နတ်ရေတွင်း မှရေကို မကြာခဏ ဆောင်
စေပြီး မင်္ဂလာယူဖွယ် အခမ်းအနားများ နှင့် ဦးခေါင်းဆေး
ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုသည် ကျိုက်မရောမြို့ ဘုရားကြီးကို လာရောက်ပြုပြင် တည်ထားစဉ်က လက်အောက်ခံမြို့
ဖြစ်သော မော်လမြိုင်မြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ကျိုက်သလ္လံစေတီ
နောက်ပိုင်းတွင် ပွန်စလိုင် နတ်ရေတွင်းမှရေကို ဆောင်ယူ
စေပြီး ဟံသာဝတီတွင် ခေါင်းဆေးလေ့ ရှိကြောင်းသိရ
ဓမ္မစေတီမင်းကြီးသည်လည်း ပွန်စလိုင်သို့ လာရောက်ကာ နတ်ရေတွင်းရေဖြင့် ခေါင်းဆေးခဲ့သည်။
သက္ကရာဇ် ၉၇၆ ခု တွင် အနောက်ဘက်လွန်မင်းသည်
ငဇင်ကာ ခေါ် ဒီဗရစ်တို၏ သန်လျင်ကို အောင်တော်မူပြီး
နောက် မုတ္တမစား ဗညားဒလ သည် မော်လမြိုင်အပါအဝင် အရံမြို့ ၃၂ မြို့မှ မြို့စားနယ်စားများနှင့်အတူ လက်ဆောင်
ပဏ္ဍာ များပါ ယူဆောင်၍အနောက်ဘက်လွန်မင်းထံ
အနာက်ဘက်လွန်မင်းသည် ပွန်စလိုင်တွင် ရေသဘင်ပွဲ
ကျင်းပ သင်္ကြန်တော်ခေါ်ကာ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုပြီး
နောက် စစ်နှစ်ကြောင်းချီကာ ထားဝယ် တနင်္သာရီ သာမက သုဝန်ခလောက် သောက္ကတဲ ကမန်ပိုက် ထိအောင်သိမ်း
” … …ရွှေစက်ရိပ်နှိုက် ဦးခေါင်းဆိုက်၏
ဖြူလှပ်ထီးနန်း ကျယ်ဝန်းမွန်းရ မုတ္တမကို
တကွနတ်ရှင် ပေးပြီးကျင်မှ ဆင်ကစသည်
မြစ်မင်းယှဉ်ပြိုင် ပွန်စလိုင်ဟု ငါးဆိုင်ဆုံကျ
ပင်လယ်ဝကို ဘဝရှေးလွန် ကျမ်းဂန်တွင်ပင်
မြော်ရပေရှင့် ကိုးထွေမျက်ရှင် ခြယ်မွှန်းဆင်သား
ရွှေစင်ပေါက်လှ ယည်နတ်သထက် နရဖုန်းထူ
စီးတော်မူ၍ နေကူယောင်မြူး ဖောင်နှင့်ကူး၍
ပျံ့ပျူးမင်းလိုက် ရေနှိုက်သဘင် စံပယ်ရွှင်မှ
အလွယ်သိမ်းယူ … … … ” ဟုရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၁၁၈ တွင် အလောင်းမင်းတရားသည် သန်လျင် ကို တိုက်ခိုက်ရာ မအောင်မြင်သဖြင့် ပွန်စလိုင်ရေဖြင့် ခေါင်းဆေးပြီးမှသာလျှင် အလိုပြည့်တော်မူသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၃၀၁ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတောင်ရသေ့ကြီးဦးခန္ဓီ သည် သူ၏ကောင်းမှုဖြစ်သော လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က တည်ထားခဲ့သည့် မော်လမြိုင် တောင်ရိုးတန်းရှိ ဦးခန္ဓီမဟာမြတ်မုနိရုပ်ပွုါးတော်ကို လာရောက် ဖူးမြော်ရင်းခေါင်းဆေးကျွန်း နတ်ရေတွင်းတွင် ဦးခေါင်းဆေးခဲ့သည်။
ယခုထက်တိုင်လည်း ခေါင်းဆေးကျွန်းသို့ လာရောက်သူများသည် နတ်ရေတွင်းမှရေကို ဆောင်ယူကာ ခေါင်းဆေးလေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။
-ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း (ဗညားဒလ)
#Credit; Kyaw Myo Oo
ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးရစဉ်က ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဗဂျမ်း၏ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့
ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးရစဉ်က ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဗဂျမ်း၏ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ရက်ကား ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ဖြစ်၍ နေ့ကား စနေနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါက ကျွန်တော်သည် လမ်းပန်းအဆောက် အအုံနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဌာနကို အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်ရာ ထိုဌာန၏ အတွင်းဝန်မှာ အိုင်-စီ-အက်စ် ဦးအုန်းဖြစ်၍ ဒုတိယအတွင်းဝန်မှာ အိုင်-စီ-အက်စ် ဦးချမ်းသာ ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်တော်သည် အမှတ် (၈)၊ ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗ-လ-စ ဌာန တွင် နေထိုင်လျက်ရှိရာ ဟင်္သာတခရိုင်သို့ ခရီးထွက်ခဲ့သည်မှအပြန် အအေးမိ၍ အနည်းငယ်ဖျားလျက်ရှိ၏။ ထိုနေ့တွင် ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကျင်းပမည် ဖြစ်ရာ ကျွန်တော်သည် နေမကောင်းသဖြင့် အကြောင်းထူးသာမရှိခဲ့လျှင် ထိုအစည်းအဝေးသို့ တက်ဖြစ်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုနေ့ကျင်းပမည့် […]
ကမန်အမည်ခံ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးမှု ရခိုင်နှင့် ကမန်ပါတီတွေ ကန့်ကွက်
ကမန်အမည်ခံ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးမှု ရခိုင်နှင့် ကမန်ပါတီတွေ ကန့်ကွက် ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအသွင်ဆောင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရမ်းဗြဲမြို့နယ်မှာ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေ ကမန်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားမူဆလင်တွေကို ကမန်တိုင်းရင်းသားဆိုပြီး နိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကဒ်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအပေါ် ရခိုင်နဲ့ကမန်တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော် ကျေးရွာမှာရှိနေတဲ့ ကမန်လူဦး ရေထက်ပိုပြီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်း နိုင်ငံရေးပါတီတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုနေကြကြောင်း ဗွီအိုအေ သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေကို ကမန် တိုင်းရင်းသားဆိုပြီး နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးနေတဲ့အပေါ် ပြန်လည်စီစစ်ပေးဖို့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(ALD)က တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ALD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်လွင် ကပြောပါတယ်။ “ဒီကျောက်နီမော်မှာ လဝကဌာနကလာပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးတယ်။ ထုတ်ပေးတဲ့နေရာ မှာ လွှဲမှားမှုတွေ တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီလွှဲမှားမှုတွေကို […]
ထူးခြားလှတဲ့ ကောက်ညှင်းထုပ်သည် မိသားစုရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ စေတနာ…
ထူးခြားလှတဲ့ ကောက်ညှင်းထုပ်သည် မိသားစုရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ စေတနာ… ကောက်ညှင်းထုပ်ရောင်းပြီးအပြန် ဆိုင်မှာဈေးလာဝယ်နေတဲ့ ဦးလေး ကောက်ညှင်းထုပ်စားချင်လို့ ကုန်သွားပြီလား ဦးလေး….. တခါတခါ လာရောင်းတာမတွေ့မိဘူးလို့ မေးတော့ လယ်တွေ ကိုင်းတွေလည်း လုပ်ရတယ်လေတဲ့….. သားရော သမီးရော သူပါ ကောက်ညှင်းထုပ်ကို မြို့မှာလည်းရောင်း ရွာစဉ်လှည့်ပြီးလည်း ရောင်းကြတယ်….. အမျိုးသမီးက အိမ်မှာကောက်ညှင်းထုပ် ဒိုင်ခံထုပ်ပေးပေါ့…. အိမ်ရှိလူကုန် အလုပ်လုပ်နေတာ သူဌေးမဖြစ်သေးဘူးလားလို့ မေးတော့….. သူဋ္ဌေးဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ ငါ့လယ် ၂ ကွက်ကုန်သွားပြီတဲ့…. ဘာဖြစ်လို့တုန်းမေးတော့ ရွာနဲ့ရွာနီးချုပ်စပ်က ကလေးတွေ…. စာနားမလည်တာတွေ…နားလည်ဖို့ စာသင်ကျောင်းက ကလေးတွေကို…. အချိန်ပို သင်ဖို့ ကျောင်းက ဆရာမတွေကို အချိန်ပိုကြေးပေးပြီး စာသင်စေတာပါ….. စာအုပ်စာတန်း မဝယ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေ စာအုပ်စာတမ်း ထောက်ပံ့ဖို့..ငါတို့ မိသားစုရှာနေတာပါတဲ့…. ရွာက စာသင်နေတဲ့ ကလေးတွေ […]